ဒီဇင်ဘာ | 2014 | မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Monthly Archives: ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ အမျိုးသားစုံစမ်းရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခြင်း
​၃​၁ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
ရာအူလ်းဝါလင်းဘတ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်နှင့် အာရှပစိဖိတ် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖိုရမ်တို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဦးညွန့်ဆွေ၊ ဒေါက်တာ မြင့်ကြည်နှင့် ဒေါက်တာဉာဏ်ဇော်တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့၌ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့ထိ ကျင်းပသည့် အမျိုးသားစုံစမ်းရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆင့်မြင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသားစုံစမ်းရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကော်မရှင် များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အမျိုးသားစုံစမ်းရေးလုပ်ငန်း လက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲ ကော်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်က အမျိုးသားစုံစမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် စိန်ခေါ်မှုများအပါအဝင် ၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခဲ့ကြသည်။
​၃​၀ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် မှ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစစ်မြိုင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်လေး၊ ဒေါ်မြမြ နှင့် ကော်မရှင်ရုံးမှ အရာထမ်း (၂) ဦးပါ အဖွဲ့သည် ကချင် ပြည်နယ်ရှိ အစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချရန် အတွက် ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ (၂၈)ရက်နေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များအား ပြန်လည်နေရာချထားပေးသည့် ငွေပျော်စံပြ ကျေးရွာ နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်စခန်းများဖြစ်သည့် စီတာပူဆွတ်ငိုင်တောင် နှင့် ဂျာမိုင်ကောင်းအာရ်စီ၊ ဝိုင်းမော်မြို့ရှိ သာဂရ သရက်တောကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၊ စိန်ဂျိုးဇက် မိုင်းနားယာယီတည်းခိုစခန်းများသို့သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ပြည်သူများနှင့် ကလေးများ၏ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက် အားတွေ့ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ အားပေးစကားပြောကြားခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
​၂​၉ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
ဒီဇင်ဘာလ ၂၂-၂၃ ရက်နေ့များက လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များတွင် တောင်သူအမျိုးသမီး ဒေါ်ခင်ဝင်း၊ သေဆုံးခဲ့ပြီး ဒေသခံကျေးရွာသားများနှင့် လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည့် သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရှုထောင့်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေး နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးပါ အဖွဲ့သည် အဆိုပါဒေသသို့ သွားရောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
​၂​၆ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
၁။ ၂၈.၁၀.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ အဖွဲ့အစည်း ၁၂၃ ဖွဲ့၏ အမည်များကို ဖော်ပြထားပြီး၊ Kachin Peace Network မှ ပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာ ပျောက် ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားစာကို မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သည် ၃၀.၁၀.၂၀၁၄ နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။
၂။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သော တိုင်ကြားစာကို ယခင်ကလည်းလက်ခံရရှိခဲ့သဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ၃၁.၁၂.၂၀၁၂ နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ပေးပို့ အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃။ ယခုထပ်မံ၍ ဤကိစ္စအား မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ၁၈.၁၁. ၂၀၁၄ နေ့တွင် တိုင်ကြားစာများ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၆၁/၂၀၁၄)၌ ဆွေး နွေးပြီး၊ ၂၄.၁၁.၂၀၁၄ နေ့တွင် တိုင်တန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကို ပြန်ကြားပေးပါရန် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ထပ်မံပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
၄။ ထို့နောက် ယခင်တိုင်တန်းချက်များနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များအား ပြန်လည်ဖတ်ရှုသုံးသပ် ခြင်း အခင်းဖြစ်ပွားရာဒေသအားမြေပုံပေါ်တွင် ကြည့်ရှု့လေ့လာခြင်း၊ နယ်မြေဒေသအခြေအနေ များအား စုံစမ်းခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးတိုင်ကြားသူ ၂ ဦးအား ကော်မရှင်ရုံးသို့ ဖိတ်ကြား၍ သိရှိလိုသော အချက်အလက်များအား မေးမြန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ ၂ ဦးအနက် ၁ ဦးသည် ၁၂.၁၂.၂၀၁၄ နေ့တွင် လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သော်လည်း အခြား ၁ ဦးသည် လာရောက် ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
၅။ ထို့ပြင် ဤအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိနိုင်ဘွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆသည့် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ ထံမှ အဝေးရောက်သက်သေ ထွက်ဆိုချက်များရယူရန် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် အကြောင်းကြား ခြင်း၊ ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဌာနများသို့ အသိပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်-
(က) အခင်းဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်သော ခြေလျင်တပ်ရင်း၏ တပ်ရင်းမှူး၊
(ခ) မြို့နယ်တရားသူကြီး၊ မိုးမောက်မြို့၊
(ဂ) မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မိုးမောက်မြို့၊
(ဃ) ရဲစခန်းမှူး၊ လွယ်ဂျယ်ရဲစခန်း၊ မိုးမောက်မြို့နယ်။
၆။ ထိုသို့​ဆောင်ရွက်နေစဉ် ၂၂.၁၂.၂၀၁၄ နေ့၌ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပြန်ကြားစာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းစာတွင် ဖော်ပြချက်များအရ ဒေါ်ဆွမ်လွတ်ရွယ်ဂျာပျောက်ဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးဒေါင်လွမ်းက “ရှေ့တော်သွင်း စာချွန်တော်အမိန့်” ရလိုကြောင်း ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်၊ တရားသူကြီး ဦမြင့်အောင်က “ ၁.၃.၂၀၁၂ နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ နှစ်ဘက်လျှောက် ထားချက်များကို အပြီးသတ်ကြားနာခဲ့ကြောင်း၊ လျှောက်ထားသူနှင့် လျှောက်ထားခံရသူတို့၏ ကျမ်းကျိန်တင်ပြချက်များအရ လျှောက်ထားသူ၏ဇနီးအား အမှတ်(၃၂၁) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည်ဟု အထင်အရှား ကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိ၍ လျှောက်ထားသူ၏ အထွေထွေ​လျှောက်လွှာကို ‘ပလပ်’ လိုက်ကြောင်း” အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သိရှိရ ပါသည်။
၇။ ရည်ညွှန်းပါ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၃၇ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်-
“ကော်မရှင်သည် အောက်ပါအကြောင်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့်ငြိစွန်းသောတိုင်တန်းချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း မပြုလုပ်ရ-
(က) တရားရုံးတစ်ခုခု၏ ရှေ့မှောက်၌စစ်ဆေးကြားနာဆဲအမှုများနှင့် တရားရုံးတခုခု ၏စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ်အယူခံမှု သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်မှု ဝင်ရောက်ဆဲအမှုများ၊
(ခ) တရားရုံးတစ်ခုခုက အပြီးသတ်စီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးသောအမှုများ။”
၈။ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ပါရန် သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
​၅ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
၁။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်-
“ ကော်မရှင်သည် မိမိစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသော ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ပေးနိုင် မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆရသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆို သက်မှတ်ချိန်းဆို ထားသည့်နေရာနှင့် အချိန် တွင် လာရောက်သက်သေခံရန် စာဖြင့် ဆင့်ဆိုခြင်း၊ ကတိသစ္စာ ပြုစေခြင်း၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း နှင့် ထွက်ဆိုချက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်းများ ပြုနိုင်သည်”
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉ တွင်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်ရာတွင် တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ၊ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေနှင့် သက်သေခံ အက်ဥပဒေတို့ပါ သက်ဆိုင်သည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆီလျော်သလို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင် သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
၃။ အထက်ပါ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကိုအောင်နိုင် (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီးဆိုသူ သေဆုံးမှုတွင် သက်သေထွက်ဆိုချက် ပေးရန်အတွက် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များကို စာဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လာရောက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်—
(က) ဦးနိုင်စိုးမြင့်၊ မွန်အမျိုးသားပါတီ၊အမှတ်(၈၈)၊ရာဇာဓိရာဇ်လမ်း၊ မြိုင်သာယာ ရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့။ မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ (၁၄.၁၁.၂၀၁၄)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၀၉၄ (၁)/ ၂၁၀/ဦး ၄ အရ ၎င်း၏ဇနီးဒေါ်မိစန်းတင်၏ ပြောကြားချက်အရ လွန်ခဲ့သော ၁၅ ရက်ခန့်ကတည်းက နေအိမ်မှ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
(ခ) ဒေါ်သန္တာ၊ အမှတ်(၁)၊ ဆရာဆောင်းလမ်း၊ စောရန်နိုင်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ အလုံ မြို့နယ်။
(ဂ) ဗိုလ်ဌေးနိုင်၊ အမှတ်(၁၀၂၁) နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ၁၀.၁၁.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃/၂၀၁(၁၃)/ စုံစမ်း/မလကဖြင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတဆင့် အကြောင်းကြားခဲ့ သော်လည်း အကြောင်းပြန်ကြားချက်မရရှိခဲ့ပါ။
၄။ ၎င်းတို့အနက် ကိုအောင်နိုင် (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီး၏ဇနီးဆိုသူ ဒေါ်သန္တာထံ မှ သက်သေထွက်ဆိုချက်ရယူရန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက် ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါ သည်—
(က) သေဆုံးသူ၏ဇနီး ဒေါ်သန္တာအား တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ ၃၁.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁ နာရီချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက်ပြီး ထွက်ဆိုချက်ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း ၃၁.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁:၂၀ နာရီ အချိန်တွင် ရှေ့နေဦးရောဘတ်စန်းအောင်ဆိုသူသာ လာရောက်ခဲ့သဖြင့် အောက်ပါ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များမှ တွေ့ဆုံ၍ ကော်မရှင်၏ ဥပဒေ အပါအဝင် တိုင်တန်းချက်နှင့် စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစနစ်များကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည် ̶
(ခ) သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ရုံးရှေ့တွင် ရောက်ရှိ နေသော ဒေါ်သန္တာမှ ၎င်းနှင့် အဖော်တစ်ဦးသာ ဝင်ရောက်၍ သက်သေထွက်ဆိုချက် ပေးရေးအတွက် သဘောမတူသဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားခဲ့ပါသည်။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များမှ ယခု မတွေ့ဆုံရသော်လည်း နောင်လာရောက် တွေ့ဆုံနိုင်ပါကြောင်း၊ သက်သေထွက်ဆိုချက်ကို စာဖြင့်လည်း ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း ရှေ့နေ ဦးရော ဘတ်စန်းအောင်အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
(ဂ) ဒေါ်သန္တာ၏ သက်သေထွက်ဆိုချက် ရယူရန်အတွက် ရှေ့နေ ဦးရောဘတ် စန်းအောင် နှင့် တွေ့ဆုံ ပြောကြားမှုများကို ၃၁.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၃ နာရီအချိန်မှ ၄ နာရီ အချိန်ထိ ပဲ့တင်သံဂျာနယ်မှ သတင်းထောက် ဒေါ်ဆွေမာသိန်းလွင် နှင့် Eleven Media Group မှ သတင်းထောက် ဦးနိုင်လင်းတို့အား ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦးမှ တွေ့ဆုံ၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၆။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ၁၈.၁၁.၂၀၁၄ ပါ ၃/၁၀၁ (၁၅၆၄)/တိုင်ကြား/ မလကဖြင့် ဒေါ်သန္တာ ထံသို့ အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံအကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်—
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ဥပဒေနှင့် တိုင်တန်းချက်များ စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစနစ်အရ တောင်းဆိုချက်အား ခွင့်ပြုနိုင် ခြင်း မရှိကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(င) သို့သော် ဒေါ်သန္တာအနေဖြင့် ထွက်ဆိုချက်ကို စာဖြင့်ရေးသားပြီး မှန်ကန် ကြောင်း ဒေါ်သန္တာ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကော်မရှင်ရုံးသို့ ၂၅.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ အရောက်ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အကြောင်းပြန်ကြား ခဲ့ပါသည်။
၇။ သို့သော် ဒေါ်သန္တာသည် ကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက်၍ သက်သေထွက်ဆိုချက်ပေးခြင်း မရှိဘဲ ဒေါ်သန္တာ၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ (စဉ် ̶ ၂၄၆၉) ဆိုသူက ၂၂.၁၁.၂၀၁၄ ရက်စွဲပါစာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အောက်ပါ အတိုင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်—
“ စာဖြင့် ပေးရမည့် ထွက်ဆိုချက်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ကိစ္စအကြောင်းအရာ၊ သိရှိ လိုသော မည်သည့်အချက်များ၊ ရှင်းလင်းပြောကြားရမည့်အချက်များ အစရှိသည်တို့ကို စာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးမည်ဆိုပါက ပိုမိုသင့်လျော်ပါကြောင်း”
၈။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ၂၄.၁၁.၂၀၁၄ ပါ ၃/၁၀၁(၁၆၀၆)/ တိုင်ကြား/မလကဖြင့် ဒေါ်သန္တာထံသို့ အောက်ပါအချက်များပေးပို့ရန် အကြောင်းကြား ခဲ့ပါသည်—
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများ အသင်းသို့ အသင်းဝင် လျှောက်ထားခဲ့သော အထောက်အထားများ ရှိ/မရှိနှင့် မရှိပါက မရှိကြောင်းနှင့် ရှိပါက မိတ္တူကူးပို့ရန်၊
(ဂ) အောင်ကျော်နိုင် (ခ) ပါကြီးသည် အလွတ်သတင်းထောက်ဖြစ်သည်ဆိုသော အထောက် အထား ရှိ/မရှိနှင့် မရှိပါက မရှိကြောင်းနှင့် ရှိပါက မိတ္တူကူးပို့ရန်၊
(ဃ) ကလောင်အမည် အောင်ကြီး သို့မဟုတ် အခြားကလောင်အမည်များဖြင့် ပြည်တွင်း /ပြည်ပ စာနယ်ဇင်းများ၌ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သော သတင်းဆောင်းပါး ရှိ/မရှိ၊ မရှိပါ က မရှိကြောင်းနှင့် ရှိပါက မိတ္တူကူးပို့ရန်။ ။
၉။ သို့ရာတွင် ဒေါ်သန္တာ၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၊ တရားလွှတ် တော်ရှေ့နေ (စဉ် ̶၂၄၆၉/၈၃)ဆိုသူက ၂၉.၁၁.၂၀၁၄ နေ့စွဲပါ “ အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင် အသတ်ခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တောင်းခံသည့် အချက်အလက်များ ကို အကျဉ်းချုံး၍ ပြောကြားခြင်း” ဟူသော စာကို ၁.၁၂.၂၀၁၄ နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီ အချိန်ခန့်၌ လကျခံရရှိပွီး ၎င်းငျးစာတှငျ် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်—
(က) အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်သည် ခရီးသွား လာစဉ် အမြဲဆိုသလို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/လမတ(နိုင်) ဝ၁၃၄၉၈ ကို ယူဆောင်သွားလာသည်ဖြစ်၍ ၎င်း၏ လက်ဝယ်၌သာရှိကြောင်း၊ အသတ်ခံရစဉ် ၎င်းနှင့် အတူ ရှိနေသောကြောင့် ၎င်းအား မသေဆုံးမီက ခေါ် ဆောင်သွားသော တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ လက်ဝယ်၌သာ ကျန်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဒေါ်သန္တာထံ တွင် အိမ်ထောင်စုစာရင်းသာရှိကြောင်း၊
(ခ) အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုပါကြီး (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင် အနေဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကော်မတီ(ယာယီ) သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာများ အသင်းသို့ အသင်း ဝင် လျှောက်ထားခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိဆိုသည်ကို ဒေါ်သန္တာအနေဖြင့် သိရှိခြင်း မရှိပါ ကြောင်း၊
(ဂ) အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီး (ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်က ရန်ကုန်တိုင်း ဂျာနယ်တွင် “ အောင်ကြီး” ဆိုသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြချက်ကို ပူးတွဲပေးပို့ပါကြောင်း၊ အခြားသော “ အောင်ကြီး” ဆိုသော ကလောင်အမည်ဖြင့် ရေးသားထားသော သတင်းနှင့် ဆောင်းပါးများကို လတ်တလော မရှာဖွေနိုင်သေး သဖြင့် ပေးပို့နိုင်ခြင်း မရှိပါကြောင်း။
၁၀။ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်၏ ပြန်ကြားစာမှာ သတ်မှတ်ချိန်ထက် ကျော်လွန်မှ ရောက်ရှိလာ သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ၂.၁၂.၂၀၁၄ ပါ ၃/၁၀၁ (၁၆၃၁)/ တိုင်ကြား/မလက ဖြင့် ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ထံ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။
(က) ၁.၁၂.၂၀၁၄ နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် လက်ခံရရှိပြီး ချက်ချင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးပါ အဖွဲ့ငယ်မှ ဖတ်ရှု လေ့လာခဲ့ကြောင်း
(ဂ) ဤကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို Website လိပ်စာ www.mnhrc.org.mm တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း။
၁၁။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် တိုင်တန်းချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် သက်သေများကို စုံလင်စွာခေါ်ယူပြီး အချိန်ယူ၍ စစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် သက်သေများ မှလည်း နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ အချိန်မီ လာရောက်၍ ထွက်ဆိုချက် ပေးကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
​၂ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၄
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မော်လမြိုင်မြို့သို့(၂)ကြိမ် သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် လည်းကောင်း၊ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ရရှိနိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း အစစအရာရာ ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော အောက်ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်၊အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာန များနှင့်သက်သေထွက်ဆိုချက်လာရောက်ပေးအပ်ခဲ့ကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် ကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည် –
(၂) အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်နှင့်လက်အောက်ခံတပ်ရင်း(၃)ရင်း၊ ဘားအံမြို့၊
ကိုအောင်နိုင်(ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုထုတ်ပြန်ချက်
၁။ ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက KKO (Klohhtoobor Karen Organization)မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူ သေဆုံးကြောင်း ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ၂၈-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မင်းသီဟန်(Education Digest)၏ “နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုအပေါ် အဖြစ်မှန် အတိုင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါရန်” တိုင်တန်းချက် ကိုလည်းကောင်း၊ ရက်စွဲမပါ မသန္တာ၏ လိပ်စာ (၁၇)ခုသို့ “ဥပဒေမဲ့ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခြင်း” တိုင်တန်းချက်ကို လည်းကောင်း၊ ၃၁-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မသန္တာ၏ “ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီး မတရား ဖမ်းဆီးညှင်းဆဲ သတ်ဖြတ်ခံရမှုအတွက် မိသားစုမှ တိုင်ကြားတင်ပြခြင်း” တိုင်တန်းချက်ကိုလည်းကောင်း လက်ခံရရှိ ခဲ့ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ကိုအောင်နိုင်(ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ရှိ/မရှိ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-
၃။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၁-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ မော်လမြိုင် မြို့နှင့်ကျိုက်မရောမြို့များသို့ ပထမအကြိမ်သွားရောက်၍ တပ်မတော်သားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များနှင့် အခြားသော သက်သေများကို တွေ့ဆုံစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
၄။ ၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် တပ်မတော် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်မှ နည်းဗျူဟာမှူး၊ တပ်ရင်းမှူးများနှင့် တပ်မတော်အရာရှိများ၊ မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ရဲအရာရှိများ၊ ဥပဒေနှင့် ဆေးပညာဌာန၊ အမှတ်(၂) ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ပါမောက္ခ (ဌာနမှူး)နှင့် မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးများ၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ် တရားသူကြီး၊ သက်သေအဖြစ် ကျေးရွာ လူကြီးများ၊ ဒေါ်သန္တာနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ အလောင်းတူးဖော်ကြမည့်သူများနှင့်အတူ ကိုအောင်နိုင်(ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီးဆိုသူ၏ အလောင်းတူးဖော်မှုကို ကြည့်ရှုလေ့လာရန် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ရွှေဝါချောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည် ၁:၄၅ နာရီအချိန်တွင် အလောင်းတူးဖော်မှုပြီးစီးခဲ့ပြီး အလောင်းကို မော်လမြိုင်မြို့၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ရင်ခွဲတိုက်သို့ သယ်ဆောင်၍ ဆေးကြောခြင်း၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရင်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း များကို ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ပါသည်။
၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၁၃-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၁၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ဒုတိယအကြိမ်သွားရောက်၍ တပ်မတော်သားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အခြားသက်သေများကို ထပ်မံတွေ့ဆုံစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
(က) မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီး (၁) ဦး
(ခ) တပ်မတော်မှ တပ်မှူးကြီးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်
တပ်မတော်သားများ (၂၀) ဦး
(ဂ) မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ (၆) ဦး
(ဃ) မှုခင်းဆရာဝန် ကြီး (၁) ဦး
(င) သတင်းစာဆရာများ (၅) ဦး
(စ) သာသနာ့ဝန်ထမ်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (၁) ပါး
(ဆ) ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ရွာသားများ (၁၁) ဦး
(ဇ) မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိသူ (၁) ဦး
(စျ) ဒီမိုကရေစီနှင့်အမျိုးသမီးကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင် (၁) ဦး
၇။ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများကိုပေးအပ်ခဲ့ကြသော ဌာနများမှာ –
၈။ ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သောစာနယ်ဇင်းများမှာ –
(က) မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း(MJA)၏ ၄-၅-၂၀၁၂နေ့ထုတ် ထုတ်ပြန်ချက်
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်လေး၏ ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ နေ့ထုတ် Eleven Media Group တွင်ရေးသား ဖော်ပြချက်
(ဂ) လဝန်းဆိုသူ၏ ၁၂-၁၁-၂၀၁၄နေ့ထုတ် ပြည်မြန်မာနေ့စဉ်သတင်းစာ၌ ရေးသားဖော် ပြမှု
(ဃ) ပြည်ကျော်ဆိုသူ၏ ၅-၁၁-၂၀၁၄နေ့ထုတ် အဓိပတိဂျာနယ်၌ ဖော်ပြထားသော “KKO ဒုဥက္ကဋ္ဌမှူးကြီး စောမိုရှေးနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း” သတင်း
(င) သတင်းထောက်ပါကြီးဆိုသူနှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြသော ပြည်တွင်း ထုတ် စာနယ်ဇင်းများ
(စ) ၁-၁၂-၂၀၁၄နေ့တွင် လက်ခံရရှိခဲ့သော ဒေါ်သန္တာ၏ရှေ့နေဆိုသူ ဦးရောဘတ် စန်းအောင်၏ ၂၉-၁၁-၂၀၁၄ရက်စွဲပါစာတွင် ဖော်ပြထားချက်များ
၉။ KKO ဗျူဟာမှူးအဆင့် စောဆန်းအောင်၏ကွပ်ကဲမှုအောက် စောဝင်းဇော် ဦးစီးအဖွဲ့သည် ကျိုက်မရောမြို့၊ ကရင်တောရွာအနီးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် ၂၀၁၄ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက် မတိုင်မီကာလများတွင် ကျိုက်မရောဒေသ၌ နယ်မြေခံအမှတ်(၂၀၈)ခြေမြန်တပ်ရင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ များနှင့်အတူ မြို့လုံခြုံရေးအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး အေးချမ်းသာယာသောဒေသတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲ ကြီး/ငယ်များဖြစ်ပွားမှု မရှိခဲ့သလို နိုင်ငံတော်နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော KNU၊ DKBA၊ KKO အဖွဲ့များ၊ မွန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့်လည်း ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိ​ကြောင်းစစ်ဆေး သိရှိရပါသည်။
၁၀။ သို့သော်သတင်းအရ စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ ည ၈:၁၀နာရီချိန်တွင် မုဒုံတပ်နယ်မှူး ဦးစီးတပ်၊ ရဲ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ မုဒုံမြို့ ရေစင်လမ်းကြားရှိ KKO နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသော ဦးဝင်းမောင်၏ နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာ သြစတေးလျား နိုင်ငံလုပ် ၉မမ ပစ်စတိုသေနတ်(၁)လက်၊ ပွိုင့် ၃၈ ခြောက်လုံးပြူး(၁)လက်နှင့် ခဲယမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း လက်နက်ခဲယမ်းများကို သိမ်းဆည်းခဲ့သော်လည်း မည်သူ့ကိုမျှ အရေးယူ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
တပ်မတော်နှင့် စောဆန်းအောင်KKO အဖွဲ့တို့၏ဖြစ်စဉ်များ
၁၁။ ၂၆.၉.၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၀ဝ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ နိတုံကျေးရွာဘက်မှ ယူနီဖောင်းဝတ် KKO လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ကျိုက်မရောမြို့ဘက်သို့ ဆင်းလာကြောင်း၊ ၎င်းKKO အဖွဲ့တွင် စောဝင်းဇော်နှင့် စောတိုးအောင်(ခ)ခေါင်းကြီးတို့ခေါင်းဆောင်ပြီး အင်အား(၂၂) ဦးခန့်ရှိကြောင်း (၄၀)မမ ဗုံးပစ်လောင်ချာ(၃)လက်၊ (၆၀)မမ စိန်ပြောင်း(၁)လက်၊ RPG(၂)လက် နှင့် လက်နက်ငယ်မျိုးစုံကိုယ်စီပါရှိကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် ကျိုက်မရောမြို့၊ အမှတ်(၂၀၈)ခြေ မြန်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦးနှင့် ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးတို့ဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင် (၆)ဦးသည် ကျိုက်မရောရဲစခန်း နယ်ထိန်းရဲတပ်ကြပ်နှင့်အတူ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းစကားပြောရန် ကျိုက်မရော မြို့နယ်၊ ကလိုင်းကနိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကရင်တောကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ သတင်းအရ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့၊ ကျိုက်မရောနယ်မြေတာဝန်ခံ ဒုရဲအုပ်နှင့် စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့မှ တပ်ကြပ်ကြီးတို့မှ သတင်းရယူရန် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကရင်တောကျေးရွာဘက်သို့ လိုက်သွားခဲ့ ကြောင်း၊ ကရင်တော (အပေါ်ရွာ)ရှိ KKO တပ်ဖွဲ့ အကောက်တဲတွင် အမှတ်(၂၀၈) ခြေမြန်တပ်ရင်း မှ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်ကြီး၊ ကျိုက်မရော ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်နှင့် နယ်ထိန်းရဲတပ်ကြပ်တို့သည် KKO အဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ စောဝင်းဇော်၊ စောတိုးအောင် (ခ) ခေါင်းကြီးတို့နှင့် အေးအေးဆေးဆေးထိုင်၍ စကားပြောခဲ့ကြကြောင်း၊ အမှတ်(၂၀၈)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီးက “ယခုလက်ရှိနေရာသည် ခမရ(၂၀၈) လှုပ်ရှားနယ်မြေဖြစ်သဖြင့် KKO အဖွဲ့အနေဖြင့် ယူနီဖောင်းဝတ်၊ လက်နက်ကိုင်၍ ဆင်းလာမည်ဆိုပါက တပ်ရင်းသို့ အကြောင်းကြားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စောဝင်းဇော်မှ ကျိုက်မရော သားဖြစ်၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးဖြစ်၍ လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့် ဆက်ပြောလျှင်ရပါ ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်ဟု စစ်ဆေးသိရှိခဲ့ ရပါသည်။
၁၂။ ထိုသို့ စကားပြောနေစဉ် KKO အဖွဲ့မှ ကျန်လက်နက်ကိုင်များသည် အကောက်တဲအတွင်း နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ နေရာယူထားကြောင်း၊ ၁၀:၁၅ နာရီအချိန်ခန့်တွင် KKO အဖွဲ့မှ ရုတ်ချည်းထ ကာ အမှတ်(၂၀၈)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး၊ ဗိုလ်ကြီးနှင့်စစ်သည် (၂)ဦးထံမှ လက်နက်ခဲယမ်း များကို သိမ်းဆည်းပြီး အနီးရှိ ရဲအုပ်(သတရ)၊ တပ်ကြပ်ကြီး(စရဖ)၊ ကျိုက်မရောရဲစခန်းမှ နယ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်နှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းရဲတို့ကိုပါ အကောက်တဲအတွင်း၌ ထိန်းသိမ်းခဲ့ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၃။ ထိုသို့ထိန်းသိမ်းခံထားရစဉ် အမှတ်(၂၀၈)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူးနောက်သို့ လိုက်ပါလာ သော ဗိုလ်ကြီး (ယာယီတပ်ခွဲမှူး၊ ဗိုလ်မှူး) ဦးစီးစစ်သည် (၁၀)ဦးတို့သည် အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ကြယ် ၄၁၆၇(ဒ) စစ်သုံးယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ KKO အဖွဲ့မှ လက်နက်ငယ်များ၊ (၄၀)မမ ဗုံးသီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ၎င်း(ယာယီတပ်ခွဲမှူး၊ ဗိုလ်မှူး)၏ ဝဲဖက်ပေါင် ရှပ်မှန်ဒဏ်ရာ (၁)ချက်၊ ယာဉ်မောင်းတပ်ကြပ် ဝဲဖက်ရင်အုံ ထိမှန် (၁)ချက်၊ တပ်ကြပ်ကြီး ယာဖက်လက်မောင်း ရှပ်မှန် (၁)ချက်တို့ ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်ရှေ့မှန်၊ တံခါးအောက်နှင့် ဝဲဘက်ရှေ့ဘီးတို့ သေနတ်ထိ မှန်၍ ရပ်တန့်သွားခဲ့ကြောင်းနှင့် အနီးမှ ဖြတ်သန်းသွားလာသည့် ရွာသူ/ရွာသား (၁၅)ဦးခန့်အား KKO အဖွဲ့မှ ခေတ္တခေါ်ယူထိန်းသိမ်းထားပြီး နေ့လည် ၁၂:၀ဝ နာရီချိန်ခန့်တွင် အရပ်သားများအား ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၄။ ထိုသို့ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ ညွှန်ကြားချက်အရ အမှတ်(၂၁၀) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ တပ်စု(၁)စုသည် စစ်ကူလိုက်သွားရာ နေ့လည် ၁:၀ဝ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကရင်တော(အပေါ်ရွာ)၌ KKO အဖွဲ့နှင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွင် လက်နက်ကြီး (၇)လုံးခန့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး လက်နက်ငယ်များဖြင့် အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ကာ နှစ်ဖက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုမရှိဘဲ ရင်ဆိုင် ထားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၅။ ဖမ်းဆီးခံရသူများအနက် နယ်ထိန်းရဲတပ်ကြပ်၊ စရဖမှ တပ်ကြပ်ကြီးနှင့် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ်တို့သည် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း၊ နေ့လည် ၃:၀ဝ နာရီအချိန်ခန့်တွင် စောဝင်းဇော်နှင့် စောတိုးအောင်(ခ)ခေါင်းကြီးတို့သည် ဖမ်းဆီးထားသည့် တပ်မတော်သားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၆)ဦးအား ၎င်းတို့ ဆုတ်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လမ်းတွင် ထွက်မပြေးရန် သတိပေး စကား ပြောကြားကာ ဖမ်းဆီးထားသူများအား ဓါးစာခံအဖြစ် ခေါ်ဆောင်၍ မွန်ငြိမ်းချမ်းကာကွယ် ရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ မော်တော်ယာဉ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် အရှေ့ဘက်သိုဆုတ်ခွာသွားခဲ့ ကြရာ ကျိုက်မရောမြို့နယ် နိတုံကျေးရွာဆိပ်ကမ်းသို့ ညနေ၄:၁၅ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ ကြောင်း၊ တပ်မတော်ပိုင် လက်နက်ခဲယမ်းများကိုယူဆောင်၍ စောဝင်းဇော်၊ စောတိုးအောင်(ခ) ခေါင်းကြီးဦးစီး KKOတပ်ဖွဲ့ဝင်(၂၂)ဦး တို့သည် စက်လှေ (၂)စီးဖြင့် အတ္ထရံမြစ်ကြောင်းအတိုင်း အထက်သို့ ဆန်တက်ကာ ကွာငန်းကျေးရွာဘက်သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထား ခဲ့သူ(၁၆)ဦးအား ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၆။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သည် ၂၀၁၄ခု စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ ၁၃၄၅ ချိန် ကြေးနန်းအမှတ် ၅ ဦး ၁ ဖြင့် ရှေ့တန်းအမှတ်(၁၉) စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊ အမှတ်(၂၂) ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်၊ အမှတ်(၁၂)စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲ ဌာနချုပ်နှင့် အခြေချစစ်ဗျူဟာအဖွဲ့ (ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)တို့အား စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီအချိန်မှစ၍ တန်းပြည့်စစ်မှု ထမ်းချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၁၇။ ထို့ပြင် အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်နှင့် တပ်ရင်းများသည် ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း သို့ ၂၆-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့ ညမှစ၍ စစ်ဆင်ရေးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ဆုတ်ခွာသွားသော စောဆန်းအောင် KKO အဖွဲ့အား လိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ရာ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၈။ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့နံနက် ၉:၃၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကျိုက်မရောမြို့၊ စက်ကုန်းလမ်းဆုံ၌ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီတစ်စီးအား တပ်မတော်၊ ရဲ၊ ရပ်ကွက်ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ရပ်တန့်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မသင်္ကာဘွယ်ရာလူတစ်ဦးအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းနှင့်အတူပါရှိသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား အရ အောင်နိုင်၊ (၄၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးခိုင်၊ ၁၂/မဂဒ(နိုင်) ဝ၁၃၄၉၈၊ အမှတ်(၂၇)၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ ကြံခင်းစုရပ်ကွက်ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်အတူ စာရွက်စာတမ်းနှင့် ပစ္စည်းများ ၆၇ မျိုး သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးထွက်ဆိုချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
၁၉။ ကိုအောင်နိုင်နှင့် အခြားသက်သေများအား စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်အရ ကိုအောင်နိုင်သည် ၂၆-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအထိ KKO အဖွဲ့နှင့်အတူ ရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ ၂၇-၉-၂၀၁၄ရက်နှင့် ၂၈-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့များတွင် တပ်မတော်နှင့် KKO တို့တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေစဉ် KKO အဖွဲ့နှင့်အတူ ထွက်ပြေးပုန်းအောင်းနေခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။
၂၀။ ၃၀-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင် ကိုအောင်နိုင်အား ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက် အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်သည် ၄-၁၀-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ စစ်ကြောင်းများတွင် အဆင့်ဆင့်လွှဲပြောင်းတွဲဖက်ပြီး KKO ​စောဝင်းဇော်အဖွဲ့မှသိမ်းဆည်းသွားသော တပ်မတော်ပိုင်လက်နက်ခဲယမ်းများကို လိုက်လံ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကိုအောင်နိုင်၏ပြသမှုကြောင့် စောဝင်းဇော်အဖွဲ့မှ သိမ်းဆည်း ယူဆောင် သွားသော အမှတ်(၂၀၈)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ အမ်အေ-၁၊ သေနတ်(၃)လက်နှင့် ခဲယမ်းများ၊ KKO အဖွဲ့၏လက်လုပ်မိုင်းပစ္စည်းများကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၁။ အမှတ်(၂၁၀)ခြေမြန်တပ်ရင်းသည် ၄- ၁၀- ၂၀၁၄ ရက်နေ့ ညနေတွင် ကိုအောင်နိုင်အား ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရွှေဝါချောင်ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်းရှိ ရှေ့တန်းအမှတ်(၂၂) ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်ထံမှ လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေဝါချောင်ရွာအနီးရှိ တောင်ကုန်းငယ်တစ်ခုသို့ ချီတက် ရောက်ရှိ ညအိပ်အခြေပြုခဲ့ကြောင်း၊ ကိုအောင်နိုင်အား တာဝန်ယူထိန်းသိမ်းသော တပ်စုမှူးမှ ခြေထောက် နှင့်လက်တို့ ကိုကြိုးတုပ်၍ (၂)ယောက်တွဲ အစောင့်ကင်းချထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ ကိုအောင်နိုင်မှ အပေါ့အလေးသွားချင်သည်ဟုပြောသဖြင့် ကင်းစောင့်တပ်သားမှကြိုးဖြေပေးခဲ့ ကြောင်း ညာဘက်လက်ကို ကြိုးချည်ထားကြောင်း၊ အပေါ့သွားပြီး၍ လက်နှစ်ဘက်အား ကြိုးတုပ်ရန်ဆောင်ရွက်စဉ် ကိုအောင်နိုင်မှ အစောင့်တပ်သားအား ကိုယ်လုံးဖြင့် တိုက်လိုက်သဖြင့် အစောင့်တပ်သားလဲကျသွားစဉ် ၎င်းကိုင်ဆောင်သော သေနတ်အားလုယူရန် ကြိုးစားခဲ့သဖြင့် အနီးရှိအစောင့်ဒုတပ်ကြပ်မှ ၎င်းကိုင်ဆောင်သောသေနတ်ဖြင့် အတွဲတို(၂)ချက် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း၊ သေနတ်အားလုယူရန် ကြိုးပမ်းစဉ် အစောင့်တပ်သား၏သေနတ်မှ ကျည်တစ်တောင့်ပေါက်ထွက်ခဲ့ ကြောင်း၊ ကိုအောင်နိုင်သည် ၎င်းနေရာတွင်လဲကျသွားခဲ့ကြောင်း၊ သေနတ်သံကြားသဖြင့် စစ်ကြောင်းမှူးနှင့် အရာရှိ များရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးမှူးမှစစ်ဆေးရာ သေနတ်ဒဏ်ရာ(၅)ချက် ထိမှန်သေဆုံးနေသည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်း၊ အချိန်မှာ ည(၇:၄၅)နာရီခန့်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ကြောင်း မှတပ်မသို့တင်ပြခဲ့ရာ တပ်မမှဖြစ်စဉ်အား စိစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်္ဂြိုလ်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေဝါချောင်ကျေးရွာအနီး ခန့်မှန်း မြေပုံညွှန်း (LU-၇၈၅၀၄၅)နေရာတွင် ည(၉:၃၅) နာရီအချိန်ခန့်၌ မြေမြှုပ်သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးထွက်ဆိုချက်များအရ သိရှိရပါသည်။
ကိုအောင်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး၏ အလောင်းအားတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း
၂၂။ ၅.၁၁.၂၀၁၄ နေ့ နံနက် ၁၁:၄၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် အောင်နိုင်ဆိုသူ၏အလောင်းအားအထက် အပိုဒ် (၄) ပါပုဂ္ဂိုလ်များရှေ့မှောက်တွင် စတင်တူးဖော်ခဲ့ကြောင်း၊ အလောင်း၏ကိုယ်ပေါ်တွင် အင်္ကျီ အပြာကွက်၊ လုံချည်အစိမ်းကွက်နှင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီတစ်ထည် ဝတ်ဆင်ထားကြောင်း၊ မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် အဆိပ်ပါဝင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှု အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဓာတုဗေဒဝန်ရုံးသို့ ပို့ဆောင်ရန် အလောင်းမြှုပ်ထားသည့် မြေနံဘေးမှ မြေသားအနည်းငယ်၊ အလောင်းပေါ်မှ မြေသားနှင့် အောက်ဘက်ကပ်လျှက်ရှိသော မြေသား၊ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီရှိ မြေသားများကို ကောက်ယူ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း၊ အလောင်းနှင့်အတူ သွားတိုက်တံတစ်ချောင်း၊ သွားတိုက်ဆေးတစ်ဗူး၊ ဆပ်ပြာမှုန့်တစ်ထုပ်နှင့် အဖြူ/အပြာ ရာဘာဖိနပ်တစ်ရံတို့ကို မြှုပ်နှံထားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
၂၃။ ၅.၁၁.၂၀၁၄ နေ့ နေ့လည် ၁:၅၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် အလောင်းအား ထုပ်ပိုးပြီး သယ်ဆောင်ရာ ညနေ ၅:၂၅ နာရီချိန်ခန့်တွင် မော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံရင်ခွဲတိုက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ည၇:၄၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် အလောင်းအား ဆေးကြောပြီး ပြင်ပဒဏ်ရာများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ကြောင်း ည ၈:၃၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် Portable X-Ray ဖြင့် ဓာတ်မှန် (၁၆) ချပ် ရိုက်ခဲ့ရာ ည ၁၀:၃၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၄။ ၆.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၀ဝ နာရီချိန်ခန့်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျွမ်းကျင်သူ မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးများ အဖွဲ့မှ ရင်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်း၊ ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် အမှတ်စဉ် ၂၈၇/၁၄ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန္တာမှ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအလောင်း၏ ဝဲဘက်ကျောပြင်တွင် မွေးရာ ပါ အမှတ်လက္ခဏာ အညိုရောင်အကွက်ရှိပြီး အရပ်မြင့်၍ ခြေဖဝါးရှည်သဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီးဆိုသူ၏ အလောင်းဖြစ်သည်ဟု အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ၇.၁၁.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်သန္တာနှင့်အဖွဲ့သည် ကိုအောင်နိုင်(ခ)ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး ဆိုသူ၏ အလောင်းအား မော်လမြိုင်မြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ သယ်ဆောင်ခဲ့ကြရာ ရေဝေးသုဿန်သို့ ရောက်ရှိပြီး ညနေ ၅:၀၀ နာရီချိန်ခန့်တွင် ဂူသွင်းသင်္ဂြိုလ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂၅။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်အနေဖြင့် တန်းပြည့် စစ်မှုထမ်းချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် စောဆန်းအောင်KKO အဖွဲ့၏ ဖောက်ဖျက်မှုများနှင့် စောဆန်းအောင်KKO အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဟုသတ်မှတ်ထားခဲ့သူတစ်ဦး သေဆုံး ခြင်းကိစ္စအား ဒေါ်သန္တာကတိုင်ကြားခြင်းနှင့် ကျိုက်မရောရဲစခန်းတွင် လူပျောက်မှု မဖွင့်လှစ်ခင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ခြင်း၊ တရားဥပဒေနှင့်အညီ သေမှုသေခင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၆။ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့များမှ ထိန်းသိမ်း၍ စစ်ဆင်ရေးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်စဉ်နေ့အချိန်တွင်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်၍လည်းကောင်း၊ ညအချိန်တွင်ခြေထောက်ပါတုပ်၍ လည်းကောင်း လုံခြုံရေးကင်းချထားပြီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း တပ်မဌာနချုပ်တွင် ခေတ္တ ထိန်းသိမ်းထားစဉ် တုတ်နှောင်ခြင်းမပြုဘဲ လုံခြုံရေးကင်းဖြင့်သာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်းနှင့် စစ်သည် များစားသကဲ့သို့ပင် အစားအသောက်များကျွေးမွေးခဲ့ကြောင်းကို စစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။
၂၇။ ၄င်းအားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခဲ့သည့် သက်သေထွက်ဆိုချက်များမရှိပါ။
၂၈။ အမှတ်(၂၁၀)ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဒုတပ်ရင်းမှူးနှင့်တပ်ခွဲမှူးသည် အချုပ်သားကိုစနစ်တကျ ချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ကြပ်မတ်ကွပ်ကဲခြင်း၊ ထွက်ပြေးပါက အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်နည်းစနစ် များအား ရှင်းလင်းညွှန်ကြားခြင်းများ အားနည်းခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးသိရှိရပါသည်။
၂၉။ အမှတ်(၂၁၀)ခြေမြန်တပ်ရင်းသည် သေဆုံးသူ၏အလောင်းအား မြှုပ်နှံခဲ့သော်လည်း ဒုတပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးတို့မှ ကြီးကြပ်မှုအားနည်းကြောင်း၊ အလောင်းမြှုပ်နှံမှုမှတ်တမ်းနှင့် ဓာတ်ပုံများ စနစ်တကျ ပြုစုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၃၀။ အမှတ်(၂၁၀)ခြေမြန်တပ်ရင်းသည် သေဆုံးသူကိုရည်စူး၍ ၁၀-၁၁-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင် တပ်ရင်းဌာနချုပ်၌ ဆွမ်းသွတ်ခဲ့ကြောင်း အရာရှိများ၏ ထွက်ဆိုချက်အရ သိရှိရပါသည်။
၃၁။ ၁၅.၁၁.၂၀၁၄နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့၌ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူ၏ အလောင်းအားရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်နှင့် ထင်မြင်ယူဆချက် အစီရင်ခံစာကိုရရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးရခြင်း အကြောင်းရင်းဆေးစစ်အစီရင်ခံချက်မှာ ဦးခေါင်း၊ ရင်ခေါင်း၊ ပေါင်နှင့်ခြေဖနောင့် တို့တွင်ရရှိသော သေနတ်ဒဏ်ရာများကြောင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၃၂။ ထို့ပြင်ကရင်ပြည်နယ်မှုခင်းဆရာဝန်ကြီးက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့သော ရင်ခွဲ စစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာ(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)ကို ဖတ်ရှုဘာသာပြန်ပြီး သေဆုံးသူ၏အလောင်းတွင် အောက်ပါဒဏ်ရာ၊ ဒဏ်ချက်များတွေ့ရှိရကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါသည̶်
(က) ဦးခေါင်းခွံရိုးကြေမွကွဲအက်ဒဏ်ရာ၊ မေးရိုးကျိုးဒဏ်ရာ၊ ယမ်းပေါက်ကွဲအားကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော သတ္တုအပိုင်းအစငယ်များ၊
(ခ) ဝဲဘက်နံရိုးကျောဘက်တွင်အမှတ်(၆)နှင့်(၇) ကျိုးနေသည်။
(ဂ) ဝဲပေါင်တွင်အရိုးကျိုးခြင်းမတွေ့ပါ။ ယမ်းပေါက်ကွဲအားကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသော သတ္တုအပိုင်းအစ ငယ်များ၊
(ဃ) ဝဲဖနောင့်ရိုးကျိုးနေသည်။ ယမ်းပေါက်ကွဲအားကြောင့် ထွက်ပေါ်လာသောသတ္တု အပိုင်းအစငယ်များ၊
(စ) မေးစေ့အောက်တွင် ၄ cm × ၂.၅ cm အရွယ်ရှိကျည်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁)ခု၊
(ဆ) ဦးခေါင်းခွံတစ်ခုလုံးကြေမွကွဲအက်ပွင့်ထွက်နေသည့်ကျည်ထွက်ရာ (၁)ခု၊
(ဇ) ဝဲဘက်ရင်အုံပေါ်တွင် ၅ cm x ၁.၅ cm နှင့် ၅ cm x ၂ cm အရွယ်ရှိသော ကျည်ထွက်ရာ (၂)ခု၊
(ဈ) ဝဲပေါင်အတွင်းဘက်တွင် ယမ်းမှုန့်စွန်းထင်းနေသော ဝ.၅ cm အချင်းရှိကျည်ဝင် ဒဏ်ရာ (၁)ခု၊
(ည) ဝဲပေါင်အပြင်ဘက်တွင်၂.၅ cm x ၂ cm အရွယ်ရှိကျည်ထွက်ဒဏ်ရာ (၁)ခု၊
(ဋ) ဝဲဖနောင့်အတွင်းဘက်တွင်၃.၅ cm x ၂ cm အရွယ်ရှိကျည်ဝင်ဒဏ်ရာ (၁)ခု၊
(ဌ) ဝဲဖနောင့်အပြင်ဘက်တွင်၉ cm x ၅ cm အရွယ်ရှိကျည်ထွက်ဒဏ်ရာ (၁)ခု၊
(ဍ) ဝဲဘက်ကျောလက်ပြင်အောက်တွင်၂.၅ cm x ၁ cm အရွယ်နှင့်၁ cm x ဝ.၅ cm အရွယ်စီရှိသော ကျည်ဝင် ဒဏ်ရာ (၂) ခု၊
(ဎ) ဦးခေါင်းဦးရေပြားအောက်သွေးခြေဥခြင်းမရှိပါ။ လည်ပင်းရိုး မကျိုးပါ၊ လည်ဇလုပ်ရိုး မကျိုးပါ။
(ဏ) ဝဲဘက်နံရိုးအမှတ်(၄) ကျိုးနေသောကျည်ဒဏ်ရာ၊
(တ) ဝဲဘက်ရင်ခေါင်းပေါ်ရှိ ကျည်ထွက်ဒဏ်ရာပတ်လည်တွင် သွေးခြေဥဒဏ်ရာများ တွေ့ရသည်။
(ထ) ဝဲဘက်အဆုတ်အပေါ်ပိုင်းတွင်၃.၅ cm x ၂.၅ cm အရွယ်နှင့်အောက်ပိုင်းတွင်၂.၅ cm x ၂ cm အရွယ်ရှိကျည်ဒဏ်ရာ (၂)ခု၊
(ဒ) ဝဲဘက်ပေါင်ရိုးအပေါ်ပိုင်း (၃)ပုံ (၁)ပုံခန့်တွင် ကျည်ဝင်ပေါက်နှင့် ကျည်ထွက်ပေါက် အကြားကျိုးနေသည်။
၃၃။ ၁၅-၁၁-၂၀၁၄နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ဓာတုဗေဒဝန်ရုံး၏ ၁၁-၁၁-၂၀၁၄ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၉၇၈/စထ(သွေး)/ရက/၂၀၁၄ ဖြင့်စစ်ဆေးချက်အရ သေဆုံးသူ၏အလောင်းတွင် ကျားဝတ်အင်္ကျီ၊ ကျားဝတ်အတွင်းခံဘောင်းဘီ၊ ပုဆိုးတို့၌ လူသွေးစမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
၃၄။ နေပြည်တော်ရှိမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၏ စစ်ဆေးချက်အရ အောက်ပါအတိုင်းသိရှိရပါသည̶်
(၁) သေဆုံးသူ၏ဝဲပေါင်ဒဏ်ရာအတွင်းဘက်မှ နမူနာဂွမ်းစတွင်ယမ်းဓာတ်ရှိကြောင်း၊
(၂) နက်ပြာရောင်အကွက်စိပ် ကျားဝတ်အင်္ကျီလက်ရှည်၏ ရှေ့ဘက်ဝဲရင်အုံအနီးရှိ အပေါက်နှင့် နောက်ကျော ဘက်ဝဲလက်ပြင်ရိုးအနီးရှိအပေါက်တို့သည် သေနတ်ပစ်ခတ် မှုကြောင့် ရရှိသောအပေါက်များဖြစ်ကြောင်း၊
(၃) အစိမ်းရောင်ကွက်စိပ်လုံချည်ရှိအကျယ် ၄.၅ cm ခန့်ရှိအပေါက်ရာသည် သေနတ် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရရှိသော အပေါက်ရာဖြစ်ကြောင်း၊
(၄) သေဆုံးသူ၏ ဝဲဘက်လက်ချောင်းအရေခွံ(၅)ခုကို ရောင်ခြည်ထိုး လက်ပုံစံများ ဖော်ထုတ် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊ လက်ပုံစံမှင်ဖြင့် နှိပ်ယူရရှိသော လက်ပုံစံများမှ လက္ခဏာရေးမျဉ်းကြောင်းများ ထင်ရှားကောင်းမွန်စွာ ပါရှိခြင်းမရှိသဖြင့် သေဆုံးသူ ၏လက်ဗွေရာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန၏ နိုင်(၂)ပုံစံမိတ္တူ ဓာတ်ပုံ နမူနာပေါ်ရှိဝဲဘက်လက်ပုံစံများနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး ထင်မြင်ချက်မပေးနိုင်ကြောင်း။
၃၅။ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းဗဟိုဌာန (MPC) မှပေးပို့သော မှတ်တမ်းများအရ ၂၂-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထိ MPC တွင် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC)နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT)တို့တွေ့ဆုံပြီး ဆဌမအကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး စာချုပ်(NCA) Single Text မူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၂၂-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ထိ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူ မှတ်တမ်းများတွင် စောဆန်းအောင်သည် DKBA ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၆-၉-၂၀၁၄နေ့မှတ်တမ်းတွင် စောဆန်းအောင်သည် နာမည်ရေးထားသော်လည်း လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ၂၄-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ Media တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းတွင် ကိုအောင်နိုင်၊ ကိုအောင်ကျော်နိုင်၊ ကိုပါကြီး၊ ကိုအောင်ကြီး စသည့်အမည်များမတွေ့ရှိရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်။
၃၆။ အမှတ်(၂၂)တပ်မဌာနချုပ်၏စစ်ကြောချက်၊ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့(မြဝတီ)တို့မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိ ချက်နှင့် မီဒီယာများမှဖော်ထုတ် ရေးသားချက်များအရ ကိုအောင်နိုင်(ခ) ကိုအောင် ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီးဆိုသူသည် ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ်သို့ သွားရောက်ကာ ABSDF သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် DKBA အဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်၍ လှုပ်ရှားခဲ့ကြောင်း၊ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ၎င်းအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့စဉ်က အောက်ပါသက်သေခံကဒ်ပြားများ ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါသည် –
(က) ကိုအောင်နိုင်အမည်ပါ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်၁၂/မဂဒ(နိုင်)ဝ၁၃၄၉၈၊
(ခ) ကိုအောင်နိုင်အမည်ပါ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ (၂-၅-၂၀၁၃)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပေး ထားသည့် Passport No. TO 008075 only for Thailand၊
(ဂ) ထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးဌာနမှထိုင်းစာဖြင့်ထုတ်ပေးထားသည့်ကျောင်းဆရာသက်သေခံ ကတ်ပြား (၃) ခု၊၎င်းတို့မှာ –
(၁) ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် နိုင်အောင်ကျော်နိုင်အမည်ဖြင့် ထုတ်ပေးထားသည့် ကတ်ပြား တစ်ခု၊
(၂) ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် နိုင်အောင်နိုင်အမည်ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသည့်ကတ်ပြားတစ်ခု၊
(၃) ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် နိုင်အောင်နိုင်အမည်ဖြင့်ထုတ်ပေးထားသည့်ကတ်ပြားတစ်ခု၊
၃၇။ ၂၂-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့မှ၂၆-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့အထိ MPC ၌ကျင်းပခဲ့သောတက်ရောက်ဆွေးနွေး ခဲ့သူများ၏ မှတ်တမ်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၄-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ ၎င်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သတင်းရယူခဲ့သူ မီဒီယာများ၏ မှတ်တမ်းများတွင်လည်းကောင်း ကိုအောင်နိုင်၊ ကိုအောင်ကျော်နိုင်၊ ကိုပါကြီး၊ (ကိုအောင်ကြီး) စသည့်နာမည်များတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အတွက် ၄င်းအား DKBA အဖွဲ့ဝင်ဟုလည်းကောင်း၊ သတင်းရယူသူတစ်ယောက်အဖြစ် လည်းကောင်း မှတ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းသုံးသပ်ပါသည်။
၃၈။ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်မှ စစ်ကြောချက်၊ ၎င်းထံမှသိမ်း ဆည်းရမိသော စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဓာတ်ပုံများမှ ဖော်ထုတ်ချက်များအရ အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ်တို့သည် ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား KKO စောဆန်းအောင်အဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတစ်ဦး ဟုသာယူဆခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။
၃၉။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ(၃)၊ ဦးမြတ်ခိုင်(လျှပ်တပြက်)နှင့် ကိုဖြိုးဝေ အောင်(ခ)ကိုအောင်ပ၊ အလွတ်သတင်းထောက်၊ ဘားအံ တို့၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ကိုအောင်နိုင် (ခ)ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီးသည် အလွတ်သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း သတင်း စာ ဆရာအသင်းဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၄၀။ ၃၀-၉-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင် ကျိုက်မရောမြို့၌မသင်္ကာသူတစ်ဦးအား စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့ရာ၌ အောင်နိုင်အမည်ပါ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် ၁၂/မဂဒ(နိုင်)ဝ၁၃၄၉၈နှင့် အခြား အထောက်အထား ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သော်လည်း ယင်းအထောက်အထားများကို အခြေပြု ပြီးမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း တိကျသေချာသောစုံစမ်းမှုများကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်း မရှိဟု သုံးသပ်ပါသည်။
၄၁။ အောင်နိုင်ဆိုသူအား မသင်္ကာဘွယ်ရာအထောက်အထားများနှင့်တကွ တွေ့ရှိသဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ သော်လည်းဖမ်းဆီးသည့်နေရာသည် ကျိုက်မရောမြို့ပေါ်တွင် ဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးသည့်အဖွဲ့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များပါဝင်ကာ ရဲစခန်းနှင့်လည်းနီးစပ်ပါလျက် နယ်ထိန်းရဲက နယ်ထိန်းအစီရင်ခံစာရေးသားတင် သွင်းခြင်း၊ ရဲစခန်း၌ မသင်္ကာမှုဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း တပ်မတော်သို့ အကြောင်းကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။
၄၂။ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်အမှတ်(၂၂)ခြေမြန်တပ်မဌာနချုပ် တို့သည် အောင်နိုင်ဆိုသူ အား အသေးစိတ်စစ်ကြောခြင်း၊ စစ်ကြောချက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးစေခြင်း၊ KKO ၏ စစ်အင်္ဂါ စဉ်နှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်း၊ DKBA နှင့် KKO တို့အားဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်း စသော အခွင့်အရေးများရှိပါလျက် ဆုံးခန်းတိုင်စိစစ်မှုများမပြုလုပ်ခဲ့ဟု သုံးသပ်ပါသည်။
၄၃။ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူသည် ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ စောဆန်းအောင် အဖွဲ့နှင့်အတူ ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း ရှိနေခဲ့သည်မှာ ထင်ရှားသော်လည်း လက်နက်ကိုင် ဆောင်၍ တပ်မတော်အားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ကင်မရာလွယ်၍သတင်းဓာတ်ပုံရယူခြင်းစသည့် သက်သေအထောက်အထားများ အထင်အရှားမတွေ့ရှိရသဖြင့် ယင်း ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိကာလအတွင်း ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူသည် KKO အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟု လည်းကောင်း၊ သတင်းထောက်တစ်ဦးဟုလည်းကောင်း တစ်ထစ်ချ ကောက်ချက်ချရန် ခက်ခဲသည့် အနေအထား ရှိပါသည်။
၄၄။ သို့သော် ၅-၁၁-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ထုတ်ဝေသော အဓိပတိဂျာနယ်၌ ပြည်ကျော်ဆိုသူက “KKO ဒုဥက္ကဋ္ဌမှူးကြီး စောမိုရှေး(DKBA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း” သတင်းဆောင်းပါး၌ ပါဝင် သော အချက်အလက်များအရ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား KKO အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တစ်ထစ် ချမှတ်ယူ နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ယင်းသတင်းဆောင်းပါး၌ KKO ဒုဥက္ကဋ္ဌမှူးကြီး စောမိုရှေး က “ကိုပါကြီးသည် KKO အဖွဲ့နှင့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ရင်းနှီးမှုရှိကြောင်း၊ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးတာကတော့ DKBA Dayမှာ သူလာရောက်၍ သတင်းလာယူကြောင်း၊ ကျွန်တော်ကြား တာက KKOရဲ့ ပြန်ကြားရေးဗိုလ်ကြီးဆိုပြီး ကြားတယ်၊ KKO တွင် ရာထူး မရှိကြောင်း၊ တာဝန် ပဲရှိကြောင်း၊ ကိုပါကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ကြောင်း” ဖော်ပြထားပါသည်။
၄၅။ စစ်ဆင်ရေးဝင်ရောက်နေသောစစ်ကြောင်းများမှ ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း၊ စစ် ကြောင်းများနှင့် အတူလိုက်ပါစေ၍ ဆုံးရှုံးသွားသော လက်နက်ခဲယမ်းအချို့အား ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ရရှိခဲ့ခြင်း၊ ထွက်ပြေး၍ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှ သေဆုံးသွားခြင်း၊ သေမှုသေခင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည် တို့ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၄၆။ ကိုအောင်နိုင်(ခ)ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီးဆိုသူသည် ၂၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ကတည်း က မြဝတီမြို့သို့ထွက်ခွါသွားရန် အခွင့်အရေးရှိသော်လည်း တပ်မတော်မှ စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက် နေသော နယ်မြေအတွင်း KKO စောဆန်းအောင်အဖွဲ့နှင့် ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့အထိ လိုက်ပါ လှုပ်ရှားခဲ့ခြင်း၊ ၃၀-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့မှ ၄-၁၁-၂၀၁၄နေ့အထိ တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ နှင့်အတူ လိုက်ပါ၍ KKO ဝင်းဇော်အဖွဲ့မှ သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည့်လက်နက်ခဲယမ်းအချို့နှင့် KKO အဖွဲ့၏ လက်လုပ်မိုင်းပစ္စည်းများကို ၎င်း၏ဖော်ထုတ်ပြသမှုကြောင့် ရရှိခဲ့သဖြင့် တပ်မတော်မှ ၎င်းအား KKO အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟုယူဆဟန်ရှိပါသည်။
၄၇။ ရန်ကုန်မြို့၊ဘားအံမြို့နှင့်မြဝတီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အချို့သတင်းထောက်များနှင့်စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းက ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြီးဆိုသူအား အလွတ်သတင်းထောက်တစ်ဦးအဖြစ် သိရှိလက်ခံထားကြသော်လည်း မော်လမြိုင်မြို့နှင့် ကျိုက်မရောမြို့ရှိ သတင်းထောက်များကမူ ကြားဖူးသော်လည်း မမြင်တွေ့ဖူးခြင်း၊ စတင်ဖမ်းဆီးခံရစဉ်က သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုချက်နှင့် အထောက်အထားများမရှိခြင်း၊ တပ်မတော်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ ချက်ချင်းသတင်းပေးပို့ တိုင်ကြားခြင်းများမရှိခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်နေသောစစ်ကြောင်း များအနေဖြင့် ကိုအောင်နိုင်ဆိုသူအား သတင်းထောက်တစ်ဦးအဖြစ် သိရှိဟန်မတူပါ။
၄၈။ ကျိုက်မရောရဲစခန်းတွင်ဒေါ်သန္တာက လူပျောက်မှုတိုင်တန်းခဲ့စဉ် ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီးဆိုသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်မှာ ၁၂/လမတ(နိုင်)ဝ၁၃၄၉၈ ဖြစ်သော်လည်း ၃၀-၁၀-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင်ကိုအောင်နိုင်ထံမှရရှိ ကတ်ပြားအမှတ်မှာ ၁၂/မဂဒ(နိုင်)ဝ၁၃၄၉၈ ဖြစ်နေ သဖြင့်လဝကမှ စိစစ်ခဲ့ရာတွင် ၁၂/မဂဒ(နိုင်)ဝ၁၃၄၉၈ ကိုကိုင်ဆောင်သူမှာ မခင်စန်းဦးဆိုသူ ဖြစ်နေ သောကြောင့် ၄င်းသည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား အတုတစ်ခုကိုလည်း ကိုင်ဆောင်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၄၉။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကိုအောင်နိုင်(ခ)ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲလုပ်ငန်းများ ကုန်စင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီး တရားဥပဒေနှင့်အညီတရားစွဲဆိုနိုင်ရေး အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
၅၀။ နိုင်ငံတော်၏လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသောကိစ္စရပ်များမှအပ လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသော အမှုကိစ္စများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့်အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သတင်းထုတ်ပြန်မှုများကို ဆောင် ရွက်သင့်ပါသည်။
၅၁။ ကိုအောင်နိုင်(ခ) ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ) ကိုပါကြီး(ကလောင်အမည် – အောင်ကြီး)ဆိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်၍ ဥပဒေအရာတွင်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပဒေ ၏အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၅၂။ ထို့ကြောင့်၂၀၀၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၇ပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အရေးများရရှိစေရန်နှင့် အများပြည်သူ အမြင်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်အတွက် ဤအမှုကိုနယ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွင် စစ်ဆေး သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့များတွင် တည်ရှိသော အကျဉ်းထောင်နှင့် ရဲအချုပ်ခန်းတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်(၅/၂၀၁၅)
၂။ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များသည် စာရင်းဇယားများအား ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်း၊ အိပ်ဆောင် များအတွင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကျဉ်းသား၊ အချုပ်သားအချို့တို့အား တစ်ဦးချင်း သီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။